ရှုးရှဲစပ်စပ်ရေဘဝဲကင်နဲ့ အူချိုကင် Grill အစုံရတဲ့ ထိုင်းလမ်းဘေးဆိုင်အပြင်ဆင်လေးနဲ့ SmokeQ21
ရှူးရှဲစပ်စပ်ရေဘဝဲကင်နဲ့ အူချိုကင် Grill အစုံရတဲ့ ထိုင်းလမ်းဘေးဆိုင်အပြင်ဆင်လေးနဲ့ SmokeQ21
19 Apr 2018 . 3:57 PM
လတ်တလော လောလောလတ်လတ်နှစ်ကူးကာလမျိုးမှာ ဟိုဟာလည်းစားချင်၊ ဒီဟာလည်းစားချင် ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်တို့အစားသမားတွေအတွက် လျှာထဲမှာပါ အရသာရှိသွားစေမယ့် အကင်ချိုမွှေးမွှေးလေးတွေ မတောင့်တမိပေဘူးလား အခရာ ပရိသတ်တို့ရေ။ ဒါဆိုရင်တော့ Facebook မှာ သရေကျလောက်စရာ ရေဘဝဲကင်တွေ၊ အူချိုကင်တွေ၊ ကြက်ကြော်တွေမနားတမ်းတင်ပြီး ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ဆိုင်လေးဆီ တခေါက်လောက် သွားကြည့် စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…..။
Pork Intestine Grill
အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရေဘဝဲကို အပေါ်က ရှုးရှဲငရုတ်သီးဖတ်အချဉ်စပ်စပ်လေးတွေဆမ်းထားတဲ့အကင်ရယ်၊ အူချိုကင်မွှေးမွှေးအိအိလေးတွေရယ် ပင်လယ်စာအစုံ ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ပွဲကြီးတွေရယ်ကို ဒီဆိုင်လေးမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရတယ်ဆိုတော့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို ချက်ချင်းပြေးစားချင်လာတော့လည်း နေ့လယ်စာချိန်လေးအမီ သွားပြေးဆွဲပြီး ကိုယ့်အစားသမားတွေအတွက် အချိန်မီလာသတင်းပို့လိုက်ပြီနော်။
ဆိုင်နာမည်လေးက SmokeQ21 တဲ့။ တကယ့် ဘန်ကောက်လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေမှာစားရမယ့် Feeling မျိုးလေး သစ်သားစားပွဲခုံပုလေးတွေရယ်၊ စားပွဲမြင့်လေး ၂ခုံလောက်နဲ့ ဆိုင်လေးရယ်ပါ။ ဆိုင်ခန်းတော်တော် ကျဉ်းကျဉ်းလေးပေမယ့် ဓါတ်ဖမ်းလို့တော့ အတော်လှသဗျ။ အခန်းတစ်ခုလုံး မျက်စိအေးအောင် မြက်ခင်းတုစိမ်းစိမ်းလေးတွေရယ်၊ နီယွန်မီးကြိုးလေးတွေ၊ လိုက်ကာလေးတွေနဲ့ အလွင့်ပါပဲ။ ဆိုင်နေရာလေးသာကျယ်ရင် မိုက်လိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း။
ကိုယ်တွေက Facebook ကပုံတွေမြင်လို့ သရေကျပြီးလာတာဆိုတော့ကာ ဆိုင်ရဲ့အဓိက ရေဘဝဲကင် ချဉ်စပ်စပ်လေးရယ်၊ အူချိုကင်လေးရယ်၊ ကဏန်းချဉ်စပ်နဲ့ ကန်စွန်းရွက်မာလာလေးမှာကြည့်လိုက်တယ်။ နာမည်ကြားရုံနဲ့ သရေကျစရာနော်။
ပထမဆုံး ချပေးတာ ရေဘဝဲကင်ပါ။ ပုံမှန် အလတ်စားအရွယ်တစ်ကောင်၊ အကောင်အသေးတကောင် ၂ကောင်တောင်ပါတယ်။ ဒီအကင်ရဲ့အဓိက အသက်က အပေါ်ကဆမ်းတဲ့ ငရုတ်သီးဖတ်စပ်စပ်လေးနဲ့ ချဉ်စပ်စပ်ဆော့စ်ဆိုတာကို သူတို့ကအထာနပ်ပါတယ်။ တကယ့် ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ ရေဘဝဲအသားထုတ်ထုတ်လေးနဲ့ ရှယ်ပါပဲ။ သူက ၃၅၀၀ ပါ။
နောက်ကြွေမိတာဆို အူချိုကင်ပါ။ ကိုယ်က အူချိုအကြိုက်သမားဆိုတော့ အူချိုကင်မွှေးမွှေးလေးကို ကောက်ညင်းလေးရယ်၊ ဆလတ်ရွက်လေးတွေနဲ့ ချပေးတာ အဲ့အူချိုလေးကို အချဉ်လေးနဲ့တို့၊ ဆလတ်ရွက်လေးထဲညှပ်၊ ကောက်ညှင်းပူပူစေးစေးလေးပုံထည့်၊ ပါးစပ်ထဲကောက်ဝါး၊ တစ်ပွဲဆို ဆိုသလောက် ကောင်းကောင်းအရသာရှိရှိစားရတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ခေါင်းမဖော်စတမ်းပါပဲဗျို့။ အူချိုလေးဒီ့ထက်ပိုလတ်ပြီး ပိုမွှေးရင် ကောင်းမှာ။ သူက ၃၀၀၀ ပါတဲ့။
It will surely make your mouth waterful.
ကဏန်းချဉ်စပ်ကတော့ မျက်လုံးမျက်ဆန်ပြူး ပြောစမှတ်တွင်စရာပါပဲဗျိုး။ ကဏန်းချဉ်စပ်တစ်ပွဲကို ကဏန်း ၅ကောင်တောင်ပါတဲ့ အယ်စတုံဗန်းကြီးကို ၄ ထောင်ပါတဲ့။ ဈေးတန်လွန်းပေမယ့် ကဏန်းချဉ်စပ်အနှစ်က ကြက်သွန်ဖြူများပြီး ချိုစပ်စပ်ကြီးဖြစ်နေတော့ စားလို့မကောင်းခဲ့ဘူး။ ကဏန်းတစ်ကောင်လည်း သိပ်မလတ်တော့ နှမြောတသနဲ့ ကြေကွဲခဲ့ရတယ်။ ၄၀၀၀ ဆိုတာ တန်တာတော့ တော်တော်တန်ပါတယ်။
ကန်စွန်းမာလာလေးကတော့ ကန်စွန်းရွက်အိအိလေးကို မာလာအနှစ်နဲ့ကြော်ထားတဲ့ပုံလေး ထမင်းတို့ ကောက်ညှင်းဆန်ပူပူလေးနဲ့စား ခံတွင်းမြိန်စရာပါပဲ။ သူက တပွဲ ၁၈၀၀ ပါတဲ့။
Water spinach mala
ဆိုင်က ဘန်ကောက်စတိုင် Street Food ပုံစံလေးရောင်းတာဆိုတော့ ဘာမှာမှာ ဖော့ခွက်လေးတွေနဲ့ ချပေးတာမျိုး ထိုင်စားစား ယူသွားသွား အဆင်ပြေတယ်။ စားပြီးသောက်ပြီးရင်လည်း ထိုင်းစတိုင် အုန်းနို့ဆန်မုန့်လုံးအချိုပွဲလေးတွေ၊ ဆိုဒါလေးတွေ အေးဆေးသောက်လို့ရတယ်။
အစားအသောက်လေးတွေ အဆင်ပြေပေမယ့် နေရာအနေနဲ့တော်တော်ကျဉ်းတာရယ်၊ ပန်ကာလေနဲ့ဆိုတော့ အပူဒဏ်ကာကွယ်ဖို့ ဒီလောက်မထိရောက်တာရယ်၊ ယင်ကောင် တော်တော့တော်တော်ကြီးများတာရယ်တော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ Take Away လေးတွေဝယ်တာက ပိုပြေပါမယ်။ ပင်လယ်စာလေးတွေ လတ်ဆတ်ဖို့နဲ့ သန့်ရှင်းမှုအတွက်လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဆိုင်ကျဉ်းလွန်းတော့ လူနည်းမယ့်အချိန် ရွေးသွားနော်။
ဆိုင်လေးကတော့ချစ်စရာလေး။ ညနေပိုင်းတွေလည်း ဆိုင်ရှေ့မှာ အကင်လေးတွေရောင်းပါသေးတယ်။ ဘန်ကောက်ကလမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေမှာထိုင်တဲ့ Feeling မျိုးလေး ခံစားချင်ရင်တော့ သွားကိုသွားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်နံရံလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံလှလှရိုက်ခဲ့ဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။ လိပ်စာလေးက အမှတ် ၈၆၊ ဗဟိုလမ်းနဲ့ မကြီးကြီးလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ပါ။ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိပါ။ SmokeQ21 တဲ့နော်။ ဆိုင်လေးတော်တော်ကျဉ်းတော့ ဝန်ထမ်းလည်းနည်းပြီးလူများရင် တော်တော်စောင့်ရတာရယ်၊ ပန်ကာလေပဲရှိတာလေးတော့ သတိထားပေးကြပါနော်။ အစားကောင်းလေးစားစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ အခရာကတော့ ညွှန်လိုက်ပြီဗျို့။
ရှုးရှဲစပျစပျရဘေဝဲကငျနဲ့ အူခြိုကငျ Grill အစုံရတဲ့ ထိုငျးလမျးဘေးဆိုငျအပွငျဆငျလေးနဲ့ SmokeQ21
လတျတလော လောလောလတျလတျနှဈကူးကာလမြိုးမှာ ဟိုဟာလညျးစားခငျြ၊ ဒီဟာလညျးစားခငျြ ဖွဈနတေဲ့ ကိုယျတို့အစားသမားတှအေတှကျ လြှာထဲမှာပါ အရသာရှိသှားစမေယျ့ အကငျခြိုမှေးမှေးလေးတှေ မတောငျ့တမိပဘေူးလား အခရာ ပရိသတျတို့ရေ။ ဒါဆိုရငျတော့ Facebook မှာ သရကေလြောကျစရာ ရဘေဝဲကငျတှေ၊ အူခြိုကငျတှေ၊ ကွကျကွျောတှမေနားတမျးတငျပွီး ဆှဲဆောငျနတေဲ့ ဆိုငျလေးဆီ တခေါကျလောကျ သှားကွညျ့ စားကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…..။
အငျတာနကျမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ရဘေဝဲကို အပျေါက ရှုးရှဲငရုတျသီးဖတျအခဉျြစပျစပျလေးတှဆေမျးထားတဲ့အကငျရယျ၊ အူခြိုကငျမှေးမှေးအိအိလေးတှရေယျ ပငျလယျစာအစုံ ဖွနျ့ခငျးထားတဲ့ပှဲကွီးတှရေယျကို ဒီဆိုငျလေးမှာ ဈေးသကျသကျသာသာနဲ့ ရတယျဆိုတော့ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ကို ခကျြခငျြးပွေးစားခငျြလာတော့လညျး နလေ့ညျစာခြိနျလေးအမီ သှားပွေးဆှဲပွီး ကိုယျ့အစားသမားတှအေတှကျ အခြိနျမီလာသတငျးပို့လိုကျပွီနျော။
ဆိုငျနာမညျလေးက SmokeQ21 တဲ့။ တကယျ့ ဘနျကောကျလမျးဘေးဆိုငျလေးတှမှောစားရမယျ့ Feeling မြိုးလေး သဈသားစားပှဲခုံပုလေးတှရေယျ၊ စားပှဲမွငျ့လေး ၂ခုံလောကျနဲ့ ဆိုငျလေးရယျပါ။ ဆိုငျခနျးတျောတျော ကဉျြးကဉျြးလေးပမေယျ့ ဓါတျဖမျးလို့တော့ အတျောလှသဗြ။ အခနျးတဈခုလုံး မကျြစိအေးအောငျ မွကျခငျးတုစိမျးစိမျးလေးတှရေယျ၊ နီယှနျမီးကွိုးလေးတှေ၊ လိုကျကာလေးတှနေဲ့ အလှငျ့ပါပဲ။ ဆိုငျနရောလေးသာကယျြရငျ မိုကျလိုကျမယျ့ဖွဈခငျြး။
ကိုယျတှကေ Facebook ကပုံတှမွေငျလို့ သရကေပြွီးလာတာဆိုတော့ကာ ဆိုငျရဲ့အဓိက ရဘေဝဲကငျ ခဉျြစပျစပျလေးရယျ၊ အူခြိုကငျလေးရယျ၊ ကဏနျးခဉျြစပျနဲ့ ကနျစှနျးရှကျမာလာလေးမှာကွညျ့လိုကျတယျ။ နာမညျကွားရုံနဲ့ သရကေစြရာနျော။
ပထမဆုံး ခပြေးတာ ရဘေဝဲကငျပါ။ ပုံမှနျ အလတျစားအရှယျတဈကောငျ၊ အကောငျအသေးတကောငျ ၂ကောငျတောငျပါတယျ။ ဒီအကငျရဲ့အဓိက အသကျက အပျေါကဆမျးတဲ့ ငရုတျသီးဖတျစပျစပျလေးနဲ့ ခဉျြစပျစပျဆော့ဈဆိုတာကို သူတို့ကအထာနပျပါတယျ။ တကယျ့ ခဉျြစပျစပျလေးနဲ့ ရဘေဝဲအသားထုတျထုတျလေးနဲ့ ရှယျပါပဲ။ သူက ၃၅၀၀ ပါ။
နောကျကွှမေိတာဆို အူခြိုကငျပါ။ ကိုယျက အူခြိုအကွိုကျသမားဆိုတော့ အူခြိုကငျမှေးမှေးလေးကို ကောကျညငျးလေးရယျ၊ ဆလတျရှကျလေးတှနေဲ့ ခပြေးတာ အဲ့အူခြိုလေးကို အခဉျြလေးနဲ့တို့၊ ဆလတျရှကျလေးထဲညှပျ၊ ကောကျညှငျးပူပူစေးစေးလေးပုံထညျ့၊ ပါးစပျထဲကောကျဝါး၊ တဈပှဲဆို ဆိုသလောကျ ကောငျးကောငျးအရသာရှိရှိစားရတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲ ခေါငျးမဖျောစတမျးပါပဲဗြို့။ အူခြိုလေးဒီ့ထကျပိုလတျပွီး ပိုမှေးရငျ ကောငျးမှာ။ သူက ၃၀၀၀ ပါတဲ့။
ကဏနျးခဉျြစပျကတော့ မကျြလုံးမကျြဆနျပွူး ပွောစမှတျတှငျစရာပါပဲဗြိုး။ ကဏနျးခဉျြစပျတဈပှဲကို ကဏနျး ၅ကောငျတောငျပါတဲ့ အယျစတုံဗနျးကွီးကို ၄ ထောငျပါတဲ့။ ဈေးတနျလှနျးပမေယျ့ ကဏနျးခဉျြစပျအနှဈက ကွကျသှနျဖွူမြားပွီး ခြိုစပျစပျကွီးဖွဈနတေော့ စားလို့မကောငျးခဲ့ဘူး။ ကဏနျးတဈကောငျလညျး သိပျမလတျတော့ နှမွောတသနဲ့ ကွကှေဲခဲ့ရတယျ။ ၄၀၀၀ ဆိုတာ တနျတာတော့ တျောတျောတနျပါတယျ။
ကနျစှနျးမာလာလေးကတော့ ကနျစှနျးရှကျအိအိလေးကို မာလာအနှဈနဲ့ကွျောထားတဲ့ပုံလေး ထမငျးတို့ ကောကျညှငျးဆနျပူပူလေးနဲ့စား ခံတှငျးမွိနျစရာပါပဲ။ သူက တပှဲ ၁၈၀၀ ပါတဲ့။
ဆိုငျက ဘနျကောကျစတိုငျ Street Food ပုံစံလေးရောငျးတာဆိုတော့ ဘာမှာမှာ ဖော့ခှကျလေးတှနေဲ့ ခပြေးတာမြိုး ထိုငျစားစား ယူသှားသှား အဆငျပွတေယျ။ စားပွီးသောကျပွီးရငျလညျး ထိုငျးစတိုငျ အုနျးနို့ဆနျမုနျ့လုံးအခြိုပှဲလေးတှေ၊ ဆိုဒါလေးတှေ အေးဆေးသောကျလို့ရတယျ။
အစားအသောကျလေးတှေ အဆငျပွပေမေယျ့ နရောအနနေဲ့တျောတျောကဉျြးတာရယျ၊ ပနျကာလနေဲ့ဆိုတော့ အပူဒဏျကာကှယျဖို့ ဒီလောကျမထိရောကျတာရယျ၊ ယငျကောငျ တျောတော့တျောတျောကွီးမြားတာရယျတော့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရပါတယျ။ Take Away လေးတှဝေယျတာက ပိုပွပေါမယျ။ ပငျလယျစာလေးတှေ လတျဆတျဖို့နဲ့ သနျ့ရှငျးမှုအတှကျလညျး လိုအပျပါသေးတယျ။ ဆိုငျကဉျြးလှနျးတော့ လူနညျးမယျ့အခြိနျ ရှေးသှားနျော။
ဆိုငျလေးကတော့ခဈြစရာလေး။ ညနပေိုငျးတှလေညျး ဆိုငျရှမှေ့ာ အကငျလေးတှရေောငျးပါသေးတယျ။ ဘနျကောကျကလမျးဘေးဆိုငျလေးတှမှောထိုငျတဲ့ Feeling မြိုးလေး ခံစားခငျြရငျတော့ သှားကိုသှားသငျ့တဲ့ဆိုငျလေးပါ။ ဆိုငျနံရံလေးနဲ့ ဓါတျပုံလှလှရိုကျခဲ့ဖို့လညျး မမနေဲ့နျော။ လိပျစာလေးက အမှတျ ၈၆၊ ဗဟိုလမျးနဲ့ မကွီးကွီးလမျးထောငျ့၊ စမျးခြောငျးမွို့နယျပါ။ မနကျ ၁၀ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိပါ။ SmokeQ21 တဲ့နျော။ ဆိုငျလေးတျောတျောကဉျြးတော့ ဝနျထမျးလညျးနညျးပွီးလူမြားရငျ တျောတျောစောငျ့ရတာရယျ၊ ပနျကာလပေဲရှိတာလေးတော့ သတိထားပေးကွပါနျော။ အစားကောငျးလေးစားစခေငျြတဲ့စတေနာနဲ့ အခရာကတော့ ညှနျလိုကျပွီဗြို့။